Ejipta : Ny fihetsiketsehan’ny mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2009 7:29 GMT
Nanamarika ny tantaran'i Ejipta amin'izao vanin'andro izao ny zava-nitranga nahamenatra niseho ny 21 febroary 1946. Tamin'izay andro izay dia mpianatra an-jatony nanao fihetsiketsehana teo amin'ny tetezana mitsingevana Abbas Bridge no notifirina sy maty an-drano tao amin'ny reniranon'i Nely, taorian'ny baiko nomen'ny manam-boninahitra Anglisy hitifitra ary talohan'ny nanokafana ny tetezana indray nony maraina
Hatramin'izay dia tsarovan'ny mpianatra Ejiptiana manerana ny firenena io andro io.
Zeinobia no nilaza misimisy kokoa ny tantara niainan'i Ejipta fony nozanahan'i Anglisy :
Manamarika ny zava-niseho mahatsiravina teo amin'ny tetezan'i Abbas Bridge ny andro nasionaly ho an'ny mpianatra. Tamin'izay fotoana izay no nanafihan'ny miaramila Anglisy sy ny mpitandro ny filaminana Ejiptiana ireo mpianatra an-jatony maro avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Caire sy ambaratonga faharoa. Teny an-dàlana ho any amin'ny mpanjaka izy ireo hangataka ny fanafoanana ny fifanarahana nataon'i Ejipta sy ny Anglisy natao ny taona 1936. Ny tetezan'i Abbas Bridge no iray amin'ireo tetezana mitsingevana ary tamin'izany andro izany dia novaohana nidiran'ny sambo sy natao sakana izy ity. Teo ambonin'ity tetezana ity ny ankamaroan'ireo mpianatra raha novohan'ny miaramila Anglisy izy ity, ka nianjera tany amin'ny reniranon'i Nely ny mpianatra aman-jatony. Maro tamin'izy ireo no maty an-drano. Ankoatry ny alahelo noho io andro io dia vahoaka Ejiptiana no naneho fanajana tamin'ny alalan'ny fitsorahan'ny lehilahy tany amin'ity renirano na dia ireo tsy voakasiky ny fanoherana aza mba hanavotana ny ady amin'ny fiainany.
Tamin'ity taona ity dia nanapa-kevitra ny mpianatra fa hatao tsy toy ny mahazatra ny fankalazana. Ny sasany amin'ireo fikambanan'ny mpianatra nantsoina haneho hevitra any amin'ireo toeram-pianarana isan-karazany no nanao ireto fangatahana ireto :
1. ny tena fanabeazana malalaka
2. fanesorana ny mpitandro filaminana avy amin'ny fanjakana eny amin'ny anjerimanontolo
3. fanafoanana ny lisitry ny mpianatra ankehitriny, ary fanoratana lisitra vaovao hanjakan'ny fahafahana ho an'ny mpianatra.
Zeinobia ihany no manohy :
Na izany aza androany dia maro tamin'ny vondron'ny mpianatra avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Caire no nanapa-kevitra fa hanao fihetsiketsehana ho fankalazana ity andro ity, maro amin'ireo vondrona ireo no vondrona pôlitika avy ao amin'ny Fianarana Ambony momba ny Varotra (Faculty of Commerce). Anisan'ireny ny Tanora 6 Aprily, ny MB (Firahalahian'ny Silamo), Kefaya, Nasserists, socialists ary ny vondrona vaovao “My right” (Ny zoko). “My right” no inoako fa mpitarika ny fihetsiketsehana any amin'ny anjerimanontolo ankehitriny.
“My right” , vondrona mazava ho azy araky ny anarany, ao amin'ny bilaoginy manokana dia mahaleo tena fa tsy mikambana amin'ny vondrona pôlitika hafa ary mikarakara manokana ny zo sy ny hevitry ny mpianatra.
Manana zavatra angatahana koa ny“My right”:
• hahena ny saram-pianarana any amin'ny anjerimanontolo.
• esorina tsy ho eny amin'ny toeram-pianarana ny mpiambina avy amin'ny fanjakana. “Niverina ny mpiambina taorian'ny didin'ny fitsarana :
Manohana ny fihetsiketsehana atao androany ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy dia zavatra mahagaga izany fa efa nampoizina.
Per Bjorklund, mpanao gazety, teny an-toerana naka sary, no namaritra ny toe-draharaha ao amin'ny “The students’ first demand: Kick state security out!“(Ny fangatahan'ny mpianatra voalohany : esory ny mpiambina avy amin'ny fanjakana!)
Ny mpianatra avy any ivelany mahita ny pôlitika ankehitriny – avy amin'ny MB hatramin'ny Sôsialista, ny Nasserists sy ny “6 April ” – no niaraka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny ora maro tao amin'ny anjerimanontolon'i Caire androany, nanohitra ny fisian'ny mpiambina avy amin'ny fanjakana eny amin'ny toeram-pianarana ary nitaky ny fampidinana ny saram-pianarana. Tsy ny kely indrindra, marobe ny mpiambina any ivelan'ny vavahady lehibe. Mahazo manao fihetsiketsehana ny mpianatra any ivelan'ny faritry ny sekoly ihany – hodidinina mpitandro ny filaminana an-jatony – afaka kelikely vao voavoha ny vavahady nihidy.
Ny 22 febroary dia nitohy sy niparitaka tany amin'ny anjerimanontolo hafa ny fihetsiketsehana. Hatreto dia mpanao pôlitika mahery fihetsika iray no “nisy naka an-keriny” – fomba filazana ny mpanao pôlitika mahery fihetsika voasambotry ny manam-pahefanana ireo tsy misy mahafantatra ny momba azy, na dia ireo havany sy ny mpisolo vava azy aza. Hossam no nilaza:
Andro hafa hanaovana fitakiana any amin'ny anjerimanontolo Ejiptiana, miaraka amin'i Mansoura sy Helwan sy ny fiambenan'ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny maraina be…
Tsy voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny mpianatra tao Mansoura ka nosamborina ny mpanao pôlitika mahery fihetsika iray antsoina hoe Motaz Adel, raha iny izy hivoaka ny toeram-pianarana nanaraka ny mpanao fihetsiketsehana iny. Mpianatra 2 hafa no vapaingotry ny mpitandro ny filaminana tany Aleksandria…
Raha hijery ny andinindininy mikasika ny andro voalohany ianao dia afaka mijery ny bilaogy Tadamon masr [Ar].
Afaka harahinao koa ny bilaogy mitantara ny fanombohan'ny fihetsiketsehana, izay tohanan'ny mpamahana bilaogy tahaka ny My right, Socialist students, A Socialist in Egypt, Resistance Students syEgyptian student national day.
Azo jerena ny sary ao amin'ny bilaogy Ahmed AbdelFatah , My right post, Sara Carr , sy Bjorklund .
Azonao jerena ny vaovao farany ao amin'ny Hossam’s bookmarks, na ao amin'ny Jaiku channel.